အခါသင်ရှိသည်တြန္းစိတ်ကူးယဉ်ဒါပေမယ့်ၾကည့္ရႈသည္လိုးဖတ္ေနရွယ်ရောက်ပြီးထိန်းရုံမဟုတ်ပါဘူးသင့်အဘို့ထိုသို့ပြုတော့ဘူးလိုဖြတ်သန်းသွားမျက်နှာပြင်နှင့်တိုက်ရိုက်အတွက်အလိန်အၻာ၊သင်လိုအပ်အဆိုပါဂိမ်းများအတွက်အခမဲ့တြန္းလိင်ဂိမ်းများ။ သင့္ဘ၀ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးထားပါတယ္။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင့်ရဲ့ကာတွန်းအရူးအမူးနှင့်အတူသစ်ကိုဇာတ်ကောင်များနှင့်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးမူရင်းဂိမ်းရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ငါတို့သည်သင်တို့သင့်ရဲ့လိင်စိတ်အပေါငျးတို့သရှုထောင့်များအတွက်ဂိမ်းများကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတစ်ဦးပါဝင်နိုင်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထို႔ေနာက္ေခါင္းစဥ္အသစ္မ်ားျဖင့္သာအသံုးျပဳ၍တည္ေဆာက္ထားပါသည္။, ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေသောဂိမ်းကိုအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ကိုဟိတ္ဟန္နဲ႔ ဖန္တီးထားေပမဲ့လႈပ္ရွားမႈတခုလံုးကေတာ့ဒါအမွန္လို႔ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကအဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ပါ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာဂိမ်းအားလုံးလှုပ်ရှားမှုအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောနှင့်သဘာဝစေမည်ကြောင်းရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်ပါရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့္ဒါဟာသင့္ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္အရာအားလုံးကိုလက္ေတြ႕က်က်ခံစားရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းဂိမ်းလည်းအားလုံးပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ကပြတင်းပေါက်,မက်စ်,အိုင်အိုဒင်းသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်အပေါ်ပြေးလျှင်နေပါစေ,ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏ကိရိယာသည်ဘရောက်ဇာကိုအခြေခံထားသောကြောင့်ဤဂိမ်းများကိုပြေးနိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်ဆိုက်ကိုလည်းပီတိဒီဇိုင်းပြုလုပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပင်အသိုင်းအဝိုင်းအပြန်အလှန်များအတွက်လိုအပ်သမျှကိရိယာများနှင့်တကွကြွလာ။ နှင့်အရာအားလုံးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏နာမတော်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုအဖြစ်.
ဒီဆိုက္ကိုဖန္တီးလိုက္တဲ့အခါမွာဒီဆိုက္ကိုဖန္တီးလိုက္တဲ့အတြက္ဟက္ကာကမၻာကဂိမ္းေတြအားလံုးကိုေသခ်ာေအာင္ဖန္တီးလိုက္ပါတယ္။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်တွေ့ကြုံခံစားချင်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲမှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားများ၏အထင်ရှားဆုံးသောအဘို့ကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအများစုဟာဖြောင့်ယောက်ျားတွေအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါပေမယ့်လည်းလိင်တူချစ်သူတွေအတွက်ဂိမ်းတွေ၊လိင်တံထောင်မတ်ဖို့အတွက်နဲ့ချစ်သူတွေအတွက်တောင်လိင်ကစားနည်းတွေရှိပါတယ်။ သင်တစ်သားမွေးမြူ၏လျှင်ပင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဟေးဒီးဂိမ်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုငါတို့ကဒီမှာရာပူဇော်သက္ကာကိုဖြစ်ကြောင်းအမျိုးအစားများအတွက်,သင်သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ရှေ့သို့တစ်ခုခုလိုချင်လျှင်၊သင်ဒီမှာရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။ လိင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာခြင်းကလိင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာစေပြီးလိင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာစေပါတယ်။ သင်ချင်တယ်သို့သော်သင်ဇာတ်ကောင်ကိုထိုးနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတပါး,သင်ပင်ပိုကောင်းသင့်ရဲ့မျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကိုက်ညီဖို့သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။, သို့သော်ငါတို့သည်လည်းသင်ဤသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းနှေး၏ရပါတယ်သမျှသောလူကြိုက်အများဆုံးကာတွန်းနှင့်သငျခနျးစာစီးရီးကနေဇာတ်ကောင်ကိုထိုးနိုင်သည့်အတွက်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရှိသည်။
သင်တစ်ဦးစွန့်စားမှုများနှင့်စစ်မှန်သောဂိမ်းအတှေ့အကွုံအရာတစ်ခုခုကိုပိုပြီးချင်လျှင်,ထို့နောက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်၏ကျိကျိတက်ထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းများပိုမိုနုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်နှင့်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဇာတ်ကောင်များနှင့်ပင်သင်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်အချို့ကိုသင်မစ်ရှင်နှင့်အတူသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ပုံပြင်များရှိပါတယ်။ ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများလွန်းစတိုင်အတွက်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတွေရှိပါတယ်နှင့်သင်ရုပ်ပြောင်သို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်များ၏မူလဖှံ့ဖွိုးတိုးတထံမှမှုတ်သွင်းကြံစည်မှုလိုင်းများနှင့်စွန့်စားခံစားနိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တို့အဘို့ဤမျှလောက်ပိုပြီးအဆင်သင့်ရှိပါတယ်နှင့်သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်လှမ်းအခမဲ့နှင့်န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားဂိမ်းကိုသင်အမာခံဂိမ်းသည်ငါတို့ဆီသို့ပြန်လာသည့်အတွက်ယနေ့ညနှင့်ညတိုင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်လည်းအားလုံးဧည့်သည်များမှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်ဆိုက်ပေါ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်ဂိမ်းတွေနဲ့လာ။ သင်ဂိမ်းများကိုမကစားမီကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အခြေအနေမရှိပါ၊အခြားသင် ၁၈ နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းများကိုအတည်ပြုရန်အချက်ထက်ပို၍ကောင်းသည်။ သင်ပြုလျှင်,ဒီမှာအရာအားလုံးရင်းသင့်ဖြစ်လိမ့်မည်. အခုအချိန်မှာအခမဲ့ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့အမာခံဂိမ်းကစားပျော်မွေ့!
© Copyright 2021 FreeAnimeSexGames All Rights Reserved